Xilliga la qabanayo doorashada gudoomiyaha golaha shacabka oo la shaaciyay – Kalfadhi
Xilliga la qabanayo doorashada gudoomiyaha golaha shacabka oo la shaaciyay
April 22, 2018 Kalfadhi
Waxa ay maanta ku yeesheen kulankoodi 2aad villa Hargeysa Guddiga qaban qaabada ee doorashada Gudoomiyaha Golaha shacabka iyagoona soo saaray bayaan ay ku faah faahinayaan jadwalka doorasho ee Gudoomiyaha cusub ee Golaha shacabka Barlamaanka Soomaaliya.
Guddigaan oo haystay 15 cisho gudaheeda inay Gudoon cusub doorashadiisa ku abaabulaan ayaa u muuqda kuwo dardargeliyay howsha loo idmaday.
Gudoomiyaha gudigaan oo warbaahinta lahadlay ayaa shaaca ka qaaday in Doorashada la qaban Doonaa 30-ka April oo ku beegan Maalinta Isniinta ee Todobaadka Dambe, Tartamayaasha ayaa is diiwaan gelin doono Isniinta iyo Talaadada 23-ka iyo 24-ka April.
Halka Musharixiinta Khudbadaha waxqabadkooda hadii la doorto ay kaga hadlayaan ay jeedin doonaan 25-ka iyo 26-ka April oo Arbacada iyo Khamiista ku asteesan, Maalmaha Jimcaha, Sabtida iyo Axadda oo ah 27-ka, 28-ka iyo 29-ka April ay isku diyaarinayaan Guddiga, si maalinta Xigta ay u qabsoomto Doorashada.
Gudoomiyaha ayaa carabka ku adkeeyay in qofkii xilkaa isku soo taagaya ee xil wasiirnimo haaya laga doonayo inuu iscasilo sidaasna looga qabanayo warqada musharaxnimadiisa.
Waxyaabaha bayaanka aan lagu soo darin waxaa kamid ah lacagta laga rabo xildhibaanka xilka Gudoomiyaha isku soo taaga.
Xilkaan loolanka loogalayo waxaa baneeyay Gudoomiyihii hore Golaha shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari kadib cadaadis badan uu kala kulmay dhinaca hay’adda fulinta ee xukuumada Soomaaliya.
Xildhibaan Maxamuud Macallin Yaxye oo u tartamaya xilka afhayeenka golaha shacabka